ဆောင်းရာသီမှာထင်းဘာတွေစားသလဲ။ ဟုတ်ပါတယ် Dolbanina ။ ဆောင်းရာသီတွင်ထင်းထင်းသည်ထင်းရှူးပင်နှင့်အမြစ်များအစေ့များကိုကျွေးမွေးသည်။ ၎င်းသည် "ပညာရှင်ဆန်ဆန်" ထပ်မံပြုလုပ်သောကြောင့်၎င်းသည်အထူးတပ်ဆင်ထားသောကိရိယာများသို့တစ်မျိုးသို့သယ်ဆောင်သည်။
lzh အတွက်ဆီးနှင်း၌ရှိရာဆောင်းရာသီယုန်။ အထူးသဖြင့်သန်မာပြီး ၄၀ ကီလိုမီတာအောက်မှာကြီးပြင်းလာတာကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပေမယ့်သူ့ကို ၃ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးမှာကားမောင်းတဲ့ငါတို့အကြိုက်ဆုံးခွေးကောင်တွေရှိတယ်။
အာဖရိကမှာတိရစ္ဆာန်တွေဘာတွေရှိလဲ ငါး Cheetah, ခြင်္သေ့, hyena ထက်အခြားမည်သည့်။ အရှေ့အာဖရိကကျောရိုးမဲ့သတ္တဝါကြက်တူရွေး၊ သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ကြက်တူရွေးများနှင့်သန္တာကျောက်တန်းများ၊ သန္တာကျောက်တန်းများ၊ လူသိများသောသတ္တဝါ ၄၀၀ ခန့်တွင်သန္တာကျောက်တန်းများပေါများသည်။
အိန္ဒိယဆင်အကြောင်းပြောပြပါ။ အိန္ဒိယဆင် (Elephas maximus) သည်တောင်အာရှတွင်ကျယ်ပြန့်သည်။ အိန္ဒိယ၊ သီရိလင်္ကာ၊ မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ အင်ဒိုချိုင်းနားနှင့်မလက္ကာကျွန်းဆွယ်တို့ပါဝင်သည်။ မျိုးကွဲ ၃ မျိုးခွဲခြားထားသည်။ ဘင်္ဂါလီ (အီး…
ocelot သူဘယ်သူလဲ ocelot ရဲ့အရှည်က ၁၀၀ ကနေ ၁၄၀ စင်တီမီတာ၊ အမြင့်က ၅၀ စင်တီမီတာ၊ အလေးချိန်က ၁၀ ကနေ ၁၆ ကီလိုဂရမ်ဖြစ်တယ်။ ကုတ်အင်္ကျီ၏အရောင်သည်အဝါရောင် - အညိုရောင်အနက်ရောင်နှင့် ...
macaw ကြက်တူရွေးအကြောင်းပြန်ကြားရေး။ ဝီကီပီးဒီးယားကိုမကမ်းပါနဲ့ ငါအရမ်းကျေးဇူးတင်လိမ့်မည်။ Macaw ကြက်တူရွေး (Ara) Macaw ကြက်တူရွေး (Ara) Macaw ကြက်တူရွေးသည်ကမ္ဘာသစ်တွင်ထူးခြားထင်ရှားသောကြက်တူရွေးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ခေါင်း၏ရှေ့ပိုင်း ...
ဘယ်လ်ဂျီယမ်ဒေသ၏အနီရောင်စာအုပ်တွင်မည်သည့်တိရစ္ဆာန်များပါ ၀ င်သည်ကို Belgorod ဒေသရှိသတ္တဝါများမှကိုယ်စားလှယ်များသည်မျိုးသုဉ်းရန်နီးကပ်လာပြီဖြစ်သည်။ Belgorod ဒေသရှိတိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်တစ်ရာခန့်ကိုရုရှားအနီရောင်စာအုပ်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဤရွေ့ကားအများအပြားပါဝင်သည် ...
shilishper ဘယ်လိုငါးမျိုးလဲ ဒါက Turgenev ရဲ့ Lgov လား။ Lord Maladets လား။ Maladets! Sheresper (သို့) asp သည်မှောင်မိုက်နေသည့်ပုံနှင့်တူသော်လည်းအထူးမျိုးစိတ်တစ်ခုကိုကိုယ်စားပြုသည်။
အဆိုပါ Tasmanian Wolf ကတည်ရှိပါသလား Tasmanian ဝံပုလွေအားလုံးမှာရှိလား? သူ့မှာဓာတ်ပုံရှိလား? သူဘယ်မှာနေသလဲ။ အဆိုပါ marsupial ဝံပုလွေ, ဒါမှမဟုတ် thylacin (Latin Thylacinus cynocephalus) မျိုးသုဉ်း marsupial နို့တိုက်သတ္တဝါဖြစ်ပြီးတစ်ခုတည်းသော ...
ဖားတွေဟာတွားသွားသတ္တဝါတွေလား။ ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါများဤရေနေသတ္တဝါများသည်ရေအောက်တွင်လည်းကောင်း၊ မြေကြီးပေါ်တွင်လည်းကောင်းနေထိုင်နိုင်သောသတ္တဝါများဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့ဘ ၀ ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, ဒီကြက်တူရွေးပုံစံ, သူတို့အောက်မှာဖြုန်းနေကြတယ် ...
သဘာဝတွင်အဘယ်ပန်းပွင့်အပင်များကို ၀ တ်မှုန်ကူးခြင်းနည်း။ တစ် ဦး ပျားပန်းပွင့်ကနေပန်းပွင့်မှပျံ, ဝတ်ရည်စုဆောင်း! မဟုတ်ပါ၊ သူသည် ၀ တ်မှုန်ကူးသူဖြစ်သည်။ လေ ၀ တ်မှုန်သည်အမည်းစက်မှပစ္စတင်သို့စီးသည်! ဒါပေမယ့်ဒီဖြစ်စဉ်ကနည်းနည်းတော့လေလေ ၀ တ်မှုန်ကူးခြင်း ...
Sochi တွင်မည်သည့်အပင်များပေါက်ရောက်သနည်း။ သစ်ပင်များ၊ သစ်အယ်သီးများ၊ စွန်ပလွံပင်များနှင့်အခြားအရာများ…ထင်းရူးပင်၊ စွန်ပလွံပင်၊ Gartvis သပိတ်ပင်များ၊ ဂျြောဂြီယန်၊
အဘယ်ကြောင့်ကဲသာဘုရင်မှိုကိုအဘယ်ကြောင့်ခေါ်သနည်း။ Caesar မှို (Amanita caesarea) ဘယ်မှာကြီးထွားသနည်း Amanitaceae မိသားစုမှစားသုံးနိုင်သောမှို။ ရုရှားအမည်သည်လက်တင်သတ်သတ်မှတ်မှတ်အမည်ကဲ့သို့ရောမအင်ပါယာ၏အုပ်စိုးရှင်များခေါင်းစဉ်မှဆင်းသက်လာသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ…
တစ်နှစ်အတွင်းအပင်တစ်ပင်မည်မျှတိုးပွားလာသည်ကိုသင်ခန့်မှန်းတွက်ချက်နိုင်သည်အမြင့်ကြီးထွားမှုနှုန်းအရ၊ သစ်ပင်များနှင့်ချုံဖုတ်များကိုအောက်ပါအတိုင်းခွဲခြားနိုင်သည် - ၁။ အလွန်လျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာခြင်း (နှစ်စဉ်တိုးတက်မှုနှုန်း ၂ မီတာအထိနှင့် ...
efa သည်အခြားမြွေများနှင့်မည်သို့ကွာခြားသနည်း။ efa ဟာအံ့သြဖွယ်မြွေတစ်ကောင်လို့ဘာကြောင့်ပြောရတာလဲ။
efa သည်အခြားမြွေများနှင့်မည်သို့ကွာခြားသနည်း။ efa ဟာအံ့သြဖွယ်မြွေတစ်ကောင်လို့ဘာကြောင့်ပြောရတာလဲ။ ၎င်းတွင်အထူးကွဲပြားခြားနားမှုမရှိပါ။ မြွေဆိုးများပါ ၀ င်သည်။
မိုးမခဘယ်လိုပေါက်လာမှာလဲ။ ရှအားဖြင့်မိုးမခဝါဒဖြန့်။ လူတိုင်းနီးပါးရဲ့ဘ ၀ မှာမိုးမခပင်နဲ့တစ်နည်းနည်းနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့အချိန်တွေ (ရယ်စရာ၊ အချစ်ဇာတ်လမ်း) တွေရှိတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ငါးမျှားတာကိုမှတ်မိတာဖြစ်နိုင်တယ်။
ဘယ်ငှက်ကအလှပဆုံးလဲ zebra finch ကြက်သားသည်လှပသောငှက်တစ်ကောင်ဖြစ်သည်။ )) ငါအမဲသားကိုမစားပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်၏သတ္တဝါ .. )) အလှဆုံးငှက်တစ်မျိုးမှာ gould finch ဖြစ်သည်။ သူမသည်သြစတြေးလျတွင်နေထိုင်သည်။ အားလုံး Crow ...
အဘယ်အရာက Schmidt ၏ဘုစပတ်ထူးခြားချက်ကိုဖြစ်စေသနည်း။ ၂၀၂၅ မီတာအမြင့်နှင့်အချင်း ၈၀ စင်တီမီတာအထိရှိသောသစ်ပင်တစ်ပင်၊ ဆလင်ဒါပင်စည်သို့မဟုတ်မကြာခဏဖြစ်လေ့ရှိသည့်အမြင့်စည်တွင်ခေါင်မိုးတစ်ခုရှိသည်။
မြေကြီးပေါ်တွင်ပင်ဂွင်းငှက်မျိုးစိတ်မည်မျှရှိသနည်း။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိပင်ဂွင်းငှက် ၁၈ မျိုးသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်နေထိုင်ကြသည်။ တောင်ဘက်ခြမ်းရှိကျွန်းများနှင့်ကမ်းရိုးတန်းများတွင်အသိုက်အားလုံး၊ ဂလက်ပါဂဂိုပင်ဂွင်းပင်တစ်မျိုးတည်းသာအီကွေတာတွင်ရှိပြီးမြောက်ပိုင်း၌ပင်နေထိုင်သည်။
ခရုမှာသွားတွေရှိပါသလား ဟုတ်တယ်၊ သူတို့ ၂၅၀၀၀ လောက်ဟာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းတဲ့လျှာပေါ်မှာရှိနေတယ် !!! ခရုတွင်သွား ၂၅၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။ အဆိုပါခရု၏လျှာကိုအများအပြား chitinous အံသွားဖုံးလွှမ်း grater radula တစ်မျိုးနဲ့တပ်ဆင်ထားသည်။ ...
81 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 1,129 စက္ကန့်ကျော် Generate ။